Enkathini yangaphambi kwezincwadi zanamuhla, njalo ngcono kwezezimali kunzima kusimangaze umuntu obhekwe izinhlelo yokukhokha entsha, ezisebenza eningi. Nokho, uhlelo ngaphansi mbumbulu Satoshi Nakamoto kuphumelele. Ngo-2009 wakhipha umqulu ikhodi yomthombo iphrojekthi yakho. Lolu suku angabhekwa ekuqaleni ukhona Bitcion yokukhokhelana.
Igama esingavamile ngempela ukuba kulalelwe, ngoba wayengakaze ibisetshenziswa umuntu phambi. Kodwa naphezu kwale mizamo futhi eziningi nezinye izinto eziphikisanayo, lokhu instrument yezimali kusukela ekuqaleni ukhona njalo kuyanda futhi namuhla uyazi kakade izilaleli enkulu isikhala Inthanethi. Yini enye edingekayo lwemali, ngaphandle abahola yayo futhi imali? Kungenxa yalesi sizathu ukuthi lapho umuntu eba amathuluzi isikhala global ukukhiqizwa yayo (okuthiwa ethola bitcoin) abangelwa yisisindo esikhulu abasebenzisi zathuthelekela buciko we ezithandwayo zezingoma "zemali". Kodwa abaningi kuphela ukwazi ukuthi ukhona bitcoin, indlela yokwenza lokhu lwemali, awusebenzi ukumela. Kunezindlela eziningana ukuze uthole ke, kuhlanganise nalezo lapho ukutshalwa kwezimali ezidingekayo. Mayelana lapho ukuze uthole bitcoin, futhi kuzoxoxwa ngani kulesi sihloko.
Bitcoin ngalezi zindlela ezilandelayo: kancane - iyunithi ulwazi, kanye uhlamvu lwemali - uhlamvu lwemali. Uma sikhuluma ngalokho a "Bitcoin" practice, kuba yokukhokhelana jikelele, esingeyena isikhungo esisodwa futhi, ngenxa yalokho, nomnikazi oyedwa kuphela. Eqinisweni, Bitcoin kuyinto nhlobo abawasebenzisayo, okungukuthi, ukhiqiza futhi uchitha. Kunzima ukubeka in ekhanda lami, kodwa isimiso yokusebenza ezifana. Kokunye futhi okuyindida ukuthi lolu hlobo lwemali ayinakho esikhwameni olusemthethweni.
Kunezinhlelo eziningi ezinikeza izinsizakalo isitoreji bitcoin, isibonelo blockchain.info. Lapha, obhaliswe kuya eside ikheli ngabanye, okuyinto kungenziwa ebalulwe ezihlukahlukene amasevisi ngemali ye cryptocurrency. Lokhu kwenziwa ngesizathu sokuthi izethameli bezikhali lwemali - umhlaba wonke, ukuze ikheli kufanele kube kokwanele. Uma kwesokunxele kuya zuza a diki of bitcoin, ungathumela ukuba isikhwama sakho semali, bese umklomelo esenana omunye lwemali ukuthi lisetshenziswa kuyo. Yini enquma ukuthandwa lokhu imali? Mhlawumbe, umyalo wokuqala okwakhe yabo kanye ehlukile. Ngoba kuze kube manje akekho umuntu owake wazama ukwakha into efana - imali ngaphandle ukubaluleka kwangempela. Elinye iphuzu elibalulekile ukuthi ukusetshenziswa kwegama, beqinisekisa ukungamethembi uRamaphosa. Ngesikhathi esifanayo hhayi yonke imisebenzi kubasebenzisi ukubona, kodwa akekho kubo Ungakwazi ukulandela ubani kubani ukudluliswa senziwa.
Ukuthuthukiswa yephrojekthi wethulwa emuva ngo-2007, kodwa okokuqala wabona ukukhanya ngo-2009 unjiniyela (noma ukuthuthukiswa ithimba) ngaphansi mbumbulu Satoshi Nakamoto ishicilele ikhodi yomthombo indalo yakhe, ngemva kwalokho kwaba ngesivinini ukusakaza World Wide Web.
Ekuqaleni Bitcoin exchange rate zifinyelela ku-dollar, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa ukuthandwa okwandayo zaqala ukuhluma futhi kufinyelelwe $ 800 ngamunye Bitcoin. Futhi lokho kulungile isamba umxhwele, futhi labo ephethwe ukuze uthole ngaphandle utshalomali bitcoin kusukela ekuqaleni, ngemva kwesikhathi esithile ukuceba ngokushesha ngokuvusa izinga lokushintshisana. Ngeshwa, Bitcoin uwela, futhi ulinganisele salo kunamasonto angaba amakhulu amathathu amadola. Nokho, ngisho ngayo iyamangalisa kakhulu. Abanye babikezela ukuwohloka lwemali, abanye - kunalokho. Ingxenye yesithathu futhi akazange cabanga ke ukuba Ponzi isikimu global. Ungafunda kabanzi mayelana nomlando lwemali kungenziwa bitcoin.org esizeni esemthethweni. Kanjani ukuze uthole zemali babezazisa, le sayithi ngeshwa angakhulumi.
Ngaphambi ufunde indlela ngokushesha uthole bitcoin, kudingeka siqonde ukuthi ziyini lolu hlobo lwemali. Phela, ukuqonda izimiso uyoveza ke ngokuyimpumelelo. Ngakho, nazi ezinye izici:
Bitcoin singanikezwanga ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Lokhu kusho ukuthi akuyona isibopho izikweletu njengoba imali evamile. Intengo incike nesidingo. Ayanda kuba, ayanda ukubaluleka lwemali. Ukuze kube lula ukukuqonda, singakwazi acha- ensimbini eyigugu kuze kukhona isidingo, bayoba intengo. Okungukuthi, kwakuthiwa, Bitcoin angawa zero. Ngakho-ke, zonke nesithakazelo nomholo lokhu cryptocurrency kufanele siqinisekise ukuthi isistimu "getters".
Bitcoin kungekho isikhungo esisodwa. Yonke idatha yokukhokha lilondolozwe nemicengezi uhlelo lwemali. Futhi isibalo kuvuna futhi izinto ethengiswa kakhulu kunazo kunqunywa Yiqiniso.
Omunye izici eziyingqayizivele - lwemali ukulinganiselwa. Ekuqaleni ikhodi wabeka abayizigidi ezingu-21 zemali, ekushayweni okuyinto ku inethiwekhi izikhathi 25 kwemizuzu engu-10. Lezi zinhlamvu zabiwa phakathi abavukuzi, okungukuthi, kunengqondo zihlanganisa ihadiwe enamandla ukuthola nengxenye enkudlwana amayunithi kukhiqizwa. Ekushayweni is sesehlile njalo eminyakeni 4, ngaleyo ndlela ukuqinisekisa ukukhuphuka unomphela emalini lwemali - uhlelo has a isakhiwo deflationary. Noma kunjalo, ngemva ukukhiqizwa zonke bitcoin bayobizwa basakaza phakathi abanikazi, ukuze umlando ohlelweni izoqhubeka.
Njengoba kuphawulwe ngenhla, ukusetshenziswa lwemali engaziwa. Naphezu kweqiniso lokuthi kunoma yikuphi ukuqhutshwa usukela, ukwazi amakhasimende wakhe akunakwenzeka, ngoba Bitcoin eyakhe kanyekanye bonke abawasebenzisayo.
Ayikho ikhomishini ukudluliselwa. Isizathu Kulula kakhulu. Njengoba kungekho isikhungo esisodwa, asikho isidingo ukukhokhela umsebenzi wakhe.
Ukwazi lezi zici lula kakhulu ukuba baqonde indlela ukwenza bitcoin.
Njenganoma iyiphi uhlelo, kusukela Bitcoin phrojekthi has izinkinga eziningi, angeke sikhone kusho ngalokucondzile kungcono sisikhulu kakhulu, kodwa noma kunjalo akhona. Okokuqala, ukuntuleka kwemlamuli munye ayivumeli ukukhansela imisebenzi exchange angaphandle. Lokhu kungasetshenziswa izigebengu. A kusimo yesibili yokuba yinkimbinkimbi isicelo. Cryptocurrency - into esingaphezulu kakhulu kwesivamile, kushintsha ngokuphelele nomqondo imali, ngakho kwabaningi kuba ehlathini elimnyama. Wesithathu futhi mhlawumbe ebaluleke kunayoyonke ethile - ingozi lalivinjelwa lwemali. Kunamaphuzu amaningana uthi kakade sezilithathile lesi sinyathelo, befuna ukulawula ngokuphelele isimo somnotho. Bitcoin - currency engaziwa, lapho Uhulumeni ngenkuthalo elwa ngokwehluleka ukuqapha kwemali. Lokhu kwakha evundile kakhulu nokukhwabanisa. Noma kunjalo, abantu abaningi bayisebenzisa e izibalo bitcoin. Ungenza kanjani ukuthi lena lwemali, zichaziwe ngezansi.
Izindlela wokwenza bitcoin
Kunezindlela eziningana indlela yokwenza eziningi bitcoin. Ukuze uqale, zibhale, bese ahlaziye ngamunye.
Pretty lula ukuthola kubo ngokusebenzisa Cranes okuthiwa - amasevisi ekhethekile ukusabalalisa bitcoin khulula. Indlela yokwenza imali? Uhlelo, lapho kukhona ukukhiqizwa yabo, ngeshwa, ingakamiswa esungulwe, ngakho automating inqubo ngeke zisebenze. By the way, kuba ukuthi akudingekile.
Imayini bitcoin, noma ezimayini. Okuzenzakalelayo iholo Bitcoins ukusebenzisa ikhompyutha izindawo.
Lwemali yokuhweba exchange isitokwe. Automating le nqubo futhi akunakwenzeka, kodwa kuletha inzuzo enkulu esikhathini esifushane yesikhathi.
Amaholo ngu crane
Lolu hlobo ukukhiqiza esanda kuqalwa. Bahlale isikhathi eside akudingekile, kusukela inzuzo yayo akuyona enkulu kakhulu. Ngamafuphi, kunekuhlanhlatsa kule game in raffle khulula. Kanye kwenkathi ethile yesikhathi, umsebenzisi uthola ithuba ukuqagela umazisi, ukudlala futhi angibusise ngesimo Bitcoin. Nokho, inani labo lincane ukuze okungenani isigamu esisodwa bitcoin zidinga semali isikhathi ukuze bathole imali. Ungaveza umbuzo esinengqondo: "? Uyini kusizakale Cranes amasayithi" Ngemva kokuvakasha umbuzo uzonyamalala ngokwalo - basuke ngokoqobo elaligcwele nswi ukukhangisa amabhanela.
Kule nqubo kubalulekile ukuyeka kabanzi kusukela kuba enkulu bitcoin Iyatholakala. Indlela yokwenza imali? Mining - izimayini iyona lwemali virtual ngezithukuthuku Computing amandla kukhompyutha. Amaqembu yabavukuzi, noma njengoba bebizwa kanjalo, abavukuzi basezimayini, ahlele amachibi ukuze uhlangane amandla umshini ukuze kusheshe kakhudlwana ukukhiqizwa cryptocurrency. Kuyinto izinhlelo "abavukuzi virtual 'ukunikeza imisebenzi ebalulekile, ngoba ukudala ukufunwa bitcoin. Indlela yokwenza imali ngale? i izimayini ezimele futhi entry echibini: Kukhona izinketho ezimbili kukhona. Inketho yokuqala akusilo inzuzo kakhulu, kusukela cishe computer ekhaya kuzodingeka amandla, ikhono ngempumelelo "Zimba" Bitcoins. Kodwa futhi echibini uzobe kuphela icala uma umshini ozokhokhela off. Ngakho-ke, abaningi, ngenxa yokuntula umthamo siqu, ukuthenga isabelo ichibi elithiwa uletha imali unomphela yokwenziwa, kuye ngokuthi ingakanani le share.
Lapha, lapho izindlela ezimbili: kuphakathi kokuthi ukutshala Bitcoins bese ulinda ukwazisa, noma ngenkuthalo ukuqagela iyehla iyenyuka ezincane. Bobabili izindlela zinendawo yazo, kodwa kungase kudingeke abanye dolobha ekuqaleni-up. Noma kunjalo, mdlalo abanekhono bazokwazi ukuletha inzuzo enhle, ezingavikelekile ezingase zibe kahle kuwumthombo wemali khona unomphela.
Indlela imali Bitcoins
Ngakho, thina esiphethweni lapho ungakwazi uhola bitcoin. Manje kudingeka unqume uzisebenzise kanjani. Uma uhlela ukuba uqhubeke usebenza kuleli umkhakha, indlela engcono kakhulu imali yabo mayningovye amachibi. Izibalo nawo owabhalwa bitcoin futhi asidingi ukuguqulwa. Nokho, uma kukhona isidingo ukusizakala la mathuluzi, ungakwazi ukuqasha izinkonzo kwabebhange eziningi, ngemva kwalokho kakade usebenza imali ezivamile. By the way, amanye amasevisi kakade ukwamukela Bitcoins ngokuthi kukhulunywa lwemali.
Kunemibono eminingana mayelana ukuba khona lokhu cryptocurrency. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi izinga lokushintshisana yenu kuyovumelana kancane kancane ukwandisa ngenxa umkhawukho wesikhathi ekushayweni. Ukuvumela lwemali ezimboza ingxenye ebanzi emakethe. Abanye bakholelwa ukuthi ushintsho kamuva yebo - lena ukuqala kwenkathi yokuphela kwezwe. Okwamanje ukutshala e bitcoin kuyingozi, ngoba akekho owaziyo ukuthi yini eyokwenzeka kumuntu kwalo, njengoba okwamanje kuchazwe ngokucacile hhayi isiqondiso motion yebo.
Manje, ngemva amaziyo olunemininingwane ethe xaxa nge cryptocurrency bitcoin, indlela yokwenza lokho, kwaba sobala. Eqinisweni, lena akunandaba ngempela. Tsine lesifanele kukwenta nje babonisa isineke futhi ukuhlakanipha. Kuyindida Bitcoin - lwemali, esadaleka angaqondi ukuthi kungani. Ngakho-ke, iyatholakala kuwo wonke umuntu ofuna ukuthola ke.
Izibuyekezo mayelana esitolo "Masterfon". Thenga ngokusebenzisa esitolo inthanethi
USuku International of Asebekhulile